Muxuu iisu casilay ergeyga gaarka ah ee madaxweyne Trump u joogay Suuriya ? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Muxuu iisu casilay ergeyga gaarka ah ee madaxweyne Trump u joogay Suuriya...
Muxuu iisu casilay ergeyga gaarka ah ee madaxweyne Trump u joogay Suuriya ?
Wuxuuna intaa ku daray ciidamada Mareykanka oo dhan iney Suuriya ka baxaan ay ka dhalan karto halis ah iney IS ay u hesho fiursad ay dib isugu soo abaabusho.
Madaxweyne Trump wuxuu maalinti Arbacada uu ku dhawaaqay inuu 2,000 oo askari oo Ameerikaan ah oo ku sugan Suuriya uu gabi ahaan la soo baxaya isaga oo go’aankiisaasi sabab uga dhigay in IS laga guuleystay.
Ilaa iyo hadda madaxweyne Trump kama hadlin iscasilaadda Mr McGurk uu xilka uu isaga casilay.
Wuxuuna maalinta Sabtida uu madaxweyne Trump markale uu ku adkeystay go’aankiisa ah iney ciidamadiisa ka soo baxaan Suuriya, isaga oo weliba carrabka ku dhuftay in IS laga guuleystay.
Previous articleDr bulxan oo cadeeyay in doodiisii si qaldan loo fasiray
Next articleXasuuqii Burco Ka Dhacay 20/12/084 oo lagu laayay alle ha u naxaristo e 43 oday oo ahaa indheer garadkii burco oo la ogaaday cidii qortay warqadii dilka loogu fuliyay,